Akhriso Hadaladii Laga Jeediyay Caleymo Saarkii Farmaajo. – Calamada.com
Akhriso Hadaladii Laga Jeediyay Caleymo Saarkii Farmaajo.
calamada February 22, 2017 2 min read
Munaasabadda oo ay kasoo qeyb galeen boqolaal qof ayaa lagu caleema saaray Maxâ€™med Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha cusub ee dowladda Federaalka Soomaaliya!.
Inta badan madaxda ciidamadoodu duullaanka gumeysi kusoo qaadeen dalka Soomaaliya ayaa kasoo qeyb galay munaasabadda lagu caleema saaray Farmaajo taasi oo marag ma doonto ka dhigaysa in hoggaamiyaha cusub ee DF-ka uu u caysanyahay shisheeyaha.
R/wasaaraha Itoobiya Haila Maryam oo khodbad kooban ka Jeediyay munaasabaddii Caleema saarka ayaa ku dheeraaday ka hadalka dagaalka Ashahaadda ladirirka ee ka socda Soomaaliya wuxuuna sheegay in dowladdiisu si adag isku barbar taagayso Xukuumadda Farmaajo.
Haila Maryam wuxuu sheegay in la dagaalanka Al Shabaab oo uu ku sifeeyay Argagaxiso ay kawada midaysanyihiin dhammaan dowladaha ciidamadoodu Soomaaliya kusoo duuleen.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isna khudbad ka Jeediyay munaasabadda wuxuuna ku dheeraaday taageerada ay xukuumaddiisu u heyso maamulka Cusub.
Maxâ€™med Cabdullaahi Farmaajo oo isna munaasabadda soo gaba gabeeyay ayaa khudbaddiisa ku sheegay in xukuumaddiisa cusub aysan Afar sano gudahood ku xasilin Karin Soomaaliya.
Wuxuu yareeyay xiisihii ay uqabeen dadka siyaasaddiisa ladhacsan wuxuuna cod dheer ku yiri “Afar sano waxbadan kuma qaban karno sababtoo ah Soomaaliya 26 sano ayay dowlad laâ€™aan aheydâ€.
Xasan Gurguurte iyo Shariif Sheekh Axmed oo iyana khudbado ka Jeediyay munaasabadda Caleema saarka ayaa ballan qaaday in ay la shaqeyn doonaan Farmaajo.
Marka la iskusoo xooriyo nuxurka Caleema Saarka Farmaajo waxay banaanka soo dhigaysay sida dowladaha Gobolka ay ula dhacsanyihiin isbedelka cusub ee dowladda Federaalka gashay iyagoona muujiyay in ay ku qanacsanyihiin dabadhilifnimada hoggaamiyaha Dowladda Federaalka.
Previous: Xabaal Wadareed Ay Ku Aasanyihiin Dad la Xasuuqay Oo Laga Helay Itoobiya.
Next: Kolanyo American Iyo Kenyaati Ah Oo Lagu Weeraray Gobalka Jubbada Hoose.